ထိုင်းမာဆက်တစ်ခုမှာ အနှိပ်ခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား၊ အကြောမှားနှိပ်ခံရပြီး သေဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မာဆက်ကို ဝင်ရောက်အနှိပ်ခံစဉ်မှာ အကြောမှာ နှိပ်မိပြီး ရုတ်တရက် အသက်ရှူရပ်တန့်ကာ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ရခြင်းဟာ ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး၊ ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက အဲဒီအမျိုးသားဟာ ဒဏ်ရာရရှိထားသူလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ သေဆုံးသူရဲ့ […]
တချိန်ယူမယ့် ဇနီးလောင်းသို့… ငါ့ထက် တော်သည်ဖြစ်စေ ငါ့ထက်ညံ့သည်ဖြစ်စေ ထိုအရာတွေကို မေ့လိုက်ပါ။ငါက သွားမယ်ဆို နင့်တိုင်ပင်မယ် နင်ကလုပ်စရာရှိမယ်ဆိုလည်း ငါ့အကုန်ပြောရမယ်။ နင်မပြောတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှ ငါမမေးဘူး ငါမပြောတဲ့ကိစ္စ မှန်သမျှလည်း နင်နားလည်ပေးဖို့လိုတယ်။နင်မဖြေရှင်းနိူင်တော့တဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေဆို ငါ့ကိုပြောပါ ငါမဖြေရှင်းနိူင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေဆိုလည်း ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ပါ့မယ်။ ငါတို့အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ကိုဆွဲပါ ဘယ်အရာမှ အစီအစဉ်မရှိပဲ […]
“အသားဖြူချင်သူများအတွက် …အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ”
“အသားဖြူချင်သူများအတွက် …အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ” အသားဖွူတာဟာ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြား လိုလားတောငျ့တတဲ့ အလှအပ တခုဖွဈပါတယျ ညိုခြောတှေ ရှိပမေဲ့ ဖွူခြောတှလေောကျ သိပျမကျြနှာ မပှငျ့ကွပါဘူး အသားဖွူစတေဲ့ အလှကုနျတှပေေါသလို သဘာဝဖွဈ အသားဖွူနညျးတှလေဲ ရှိပါတယျ အသားဖွူခငျြသူတှေ အတှကျ သိသလောကျ အောကျမှာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ *သဘာဝဖွဈ အသားဖွူပစ်စညျးမြား […]
ခဉျြပေါငျဟငျးဆိုရငျ သိပျကွိုကျလို့ စားသာ စားနခေဲ့တာ အခုလို မသိခဲ့ဘူး… ချဉ်ပေါင်ပင် တစ်ပင်လုံးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဟင်းချို ၊ ချဉ်ရည်ဟင်း…စသည့် ထမင်းမြိန် ဟင်းလျာများအဖြစ် စာလေ့ရှိကြပါသည်။ တချို့ အရပ်ဒေသများ တွင် အရွက်ရင့်ရင့်၊ အပွင့်နှင့် အသီးတို့ ကို […]
ကလေးတွေကို ရွှေဝတ်ပေးတဲ့ မိဘများ သင်ခန်းစာ ယူဖို့ ဒီနေ့လှိုင်သာယာမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်
ကလေးတွေကို ရွှေဝတ်ပေးတဲ့ မိဘများ သင်ခန်းစာ ယူဖို့ ဒီနေ့လှိုင်သာယာမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ချစ်ကြတာကြောင့် လှဖို့ ကြည့်ကောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေ ဆင်ပေးကြပါတယ်…တကယ်တော့ အသက်ငယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို ခုလိုတန်ဖိုးကြီးတာတွေ ဆင်ပေးတာဟာ အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ အောက်က ဖော်ပြပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးက သက်သေပါပဲ။ ဖြစ်စဉ်က(( […]
ယငျဖို တောငျ မသနျး ဖူးပဲ ဗိုကျကွီးတယျ ဆိုတဲ့ အပြိုစငျတှေ !
ယငျဖို တောငျ မသနျး ဖူးပဲ ဗိုကျကွီးတယျ ဆိုတဲ့ အပြိုစငျတှေ ! ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဓတ်ကင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်တွေ က မယ်သီလရှင် ခေါင်းတိုင်းဖြစ်နေပါတော်သည်။ […]
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပေါ်က ဘုရားဖူးပြည်သူများရဲ့ဒုက္ခ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတန်ခိုးကြီးဘုရားများနှင့်အလှူငွေစံချိန်တင်ရရှိသည့်အထဲတွင် ဘုရားဆံတော်ကိန်းဝပ်သည့်ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်ဘုရားအား မြန်မာပြည်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှတင်မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားသားဘုရားဖူးဧည့်သည်များပါ လာရောက်ဖူးမျှော်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။ ဘုရားဆံတော်ကိန်းဝပ်တော်မူသော ကျိုက်ထီးရိုးစေတီသည် နှစ်စဉ်အလှူငွေစံချိန်တင်ရရှိပါသော်လည်း ဘုရားဖူးပြည်သူများ၏ ညအိပ်တည်းခိုနေထိုင်မှုအတွက် အခမဲ့တည်းခိုဆောင်များသည်အလွန်နည်းပါပြီး …. လုံလောက်စွာဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမရှိပါသဖြင့် အေးစိမ့်သောဆောင်းရာသီများတွင် လေဒဏ် ၊ နှင်းဒဏ်၊ အအေးဒဏ်ခံကာ ဘုရားဖူးနိုင်ရေးအတွက် […]
မန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ (၃)နှစ်တာ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာ
မန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ (၃)နှစ်တာ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာ December 28, 2019 adminLeaveaComment on “မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ (၃)နှစ်တာ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာ” Myanmar Idol Season (4) ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Winner ဆုရှင်ကတော့ ဒီနေ့ညမှာ […]
အိုင်ဒေါ ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲ ဓာတ်ရိုက် Live လာနေပီ။ ဘယ်သူ Winnerဖြစ်မလဲ?
ဘယ်သူ Winnerဖြစ်မလဲ? Myanmar Idol Season4Grand Final ဓာတ်ရိုက် Live Myanmar Idol Season4မှ ကျင်းပခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ် အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးဟာဆိုရင်တော့ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ပြီးဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ၀ါသနာရှင်များကို စီစစ်ရွေးချယ်ပီး […]
တှတေို့ငျးရနျဖွဈတဲ့ အဖှားနှဈဦးကို လကျဝှထေို့းဖို့ ရှာသားတှကေ စီစဉျပေး
တှတေို့ငျးရနျဖွဈတဲ့ အဖှားနှဈဦးကို လကျဝှထေို့းဖို့ ရှာသားတှကေ စီစဉျပေး ထိုင်းနိုင်ငံ ဥဒုံသာနိမြို့အနီးက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ ကျောင်းတော်က ရန်စရှိတဲ့ အဖွားအိုနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့တိုင်း အမြဲလိုလို ရန်ဖြစ်လေ့ရှိပါသတဲ့။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ငြူစူစောင်းမြောင်း ဆဲဆိုလေ့ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကို ရွာသားတွေက အလွန်သတိထားမိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ရွာသားတွေဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ရေကန်အလယ်မှာ […]